डार्कसर्कल र डन्डीफोर आएर हैरान हुनु हुन्छ ? केराको बोक्राले ७ दिनमै हुन्छ अनुहार सफा ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/डार्कसर्कल र डन्डीफोर आएर हैरान हुनु हुन्छ ? केराको बोक्राले ७ दिनमै हुन्छ अनुहार सफा !
हा’मी धेरैलाई के’राको फाइदाका बारेमा त थाहा नै होला। तर,केरा के’राको बोक्राका बारेमा भने कमैलाई मात्र थाहा हुन स’क्छ । केराको बोक्रामा म्या’ग्नेसियम, पोटासियम र का’र्बोहाइड्रेटजस्ता न्यूट्रिएट्स जस्ता तत्व पाइने गरिन्छ । त्यसैले केराको बोक्राका पनि फाइदा हुने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई केराको बोक्राका फाइदाका बारेमा जानकारी दिदै छौँ :**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **